musha Africa Ray Hushpuppi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Ray Hushpuppi Biography inoratidza chokwadi nezve yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Hupenyu hweRudo (musikana), Hupenyu hweMunhu, Net yakakosha, uye Chitendero.
Mukupfupisa, iko kuongorora kwakazara kwezviitiko zvinozivikanwa zvine chekuita nemazuva ake ekutanga kusvika mukurumbira wake.
Iwe neni tinoziva kuti ane nharo muNigerian socialite anozivikanwa zvikuru nehupenyu hwake hwoumbozha uye kuratidzwa kune mavara pasocial media.
Anogona kunge aine vateveri vazhinji nevanovenga futi. Gara nepatinenge tichizarurira uye tichikupfumisa nenhoroondo yehupenyu inonakidza yeHushpuppi.
Hushpuppi Yemwana Nhau:
Kutanga, uyu mugakava wekuNigeria, ane zita chairo anonzi Raymond Igbalode Abass akazvarwa kuna baba vake naamai vake vaive Taxi Driver uye Bread-mutengesi zvakateerana. Bhavhudhe ake anopembererwa gumi nemana muna Chikumi.
Kunyangwe gore rake rekuzvarwa risina kuoneswa, ruzivo rwake rwemujeri rwakaratidza kuti akazvarwa muna 1983. Mamwe mazita ake anosanganisira 'Aja Puppi' aka Aja 4.
Asati akura, akaona hupenyu hushoma hwekutanga hwekutambudzika pamwe chete nemhuri yake muGuta reLagos rinofamba-famba. Kurarama kunofanirwa kunge kwaireva kupona kweakanyanya simba kumhuri yake.
Hushpuppi Biography - Mhuri Mhemberero uye Mavambo:
Dzimwe nguva anonzi sebhiza rakasviba, nyaya yake inotangira kubva kunzvimbo inoninipisa nababa vake, amai, uye mukoma. Vakanga vachinyunyuta munzira yavo muhupenyu.
Mhuri yake midzi yakateerwa kuNigeria; uko kwaakazvarwa uye akakurira. Iye werudzi rweYoruba wedzinza mu Africa uye anotaura Yoruba (imwe yemitauro yakadzika yeNigeria) zvakatsetseka.
Kufananidzwa nevaya vakakurira muLagos panguva yehupenyu hwake hwekutanga, Ray anofanira kunge akafunda chikoro chevanhu vese kuchikoro chake chepuraimari nesekondari.
Muzvinabhizinesi anozvarwa muNigeriya aizoenda kuMalaysia kunotsvaga mafuro manyoro. Kutaura nezvazvo, iwe unofunga kuti akaita here?
Hushpuppi's Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Kunyangwe hazvo isu tichiziva, iye muzvinabhizinesi, mhando yebhizimusi iro raRaymond raanopinda maari harizivikanwe. Zvakangodaro, kubvira paakabuda muNigeria achienda kuMalaysia, pakave nemadhora makumi matatu nemazana masere uye neshanduko yakangoerekana yaitika. Mamiriro ake eMari akakwirisa.
Hushpuppi's Bio - Simuka Mukurumbira:
Kukwira kwemari kwemuzvinabhizimusi weMalaysia kunyangwe zvakadaro kwakauya nekuratidzira kunotyisa kwehupfumi hwaakange aunganidza kubva ipapo.
Akagara achiratidzira, pa media media kuuya kwechero kutenga kunodhura uye mararamiro akasarudzika. Kunyangwe iye akakundwa nekukurumidza kwake kuchinja chinzvimbo.
Mumwe anofanirwa kufungidzira kuti iye ane mutori wemifananidzo anomutevera kwese kwese, nehukuru hwaanoratidzira zvinhu zvake achangotenga uye neakaipisisa bling hupenyu. Uye zvechokwadi, yake show-off yakamukunda iye makuru mafeni uye vateveri.
Nehurombo kuna Hushpuppi, mukurumbira wake unobvawo mukusungwa kwake kusingaperi nekuda kwekubata kwake mabasa ehunyengeri uye mhosva dzepamhepo. Akange achangobva kusungwa kumba kwake kuDubai uye akazotorwa neUnited Arab Emirates (UAE) kuenda kuUnited States nekuda kwecyber-heist.
Hushpuppi Cyber ​​tsotsi Nyaya:
Kuedza kufunga kuti sei munhu angasarudza kubatanidzwa muCyber-kuba kungave kusinganzwisisike. Panyaya yeHushpuppi, Inogona here kupukunyuka nekukurumidza kubva pachokwadi chekuuya kubva mukuzvininipisa kumashure?
Zvinotyisa kuti Hushpuppi akazviunganidzira mari yakawanda sei kubva pamabasa ake enhema.
Muna Kukadzi 2019 chete, akaita mari yekukwereta inosvika mamirioni emadhora 14.7 mumhosva yake yecomputer iyo yakanzi inopararira kuburikidza nemaakaundi emabhangi akasiyana pasirese.
Mukumhan'ara kwekupara mhosva kwakaiswa musi wa 25 Chikumi 2020 nevatsigiri vehurumende muLos Angeles maererano nemakomputa, zvirongwa zvehunyengeri (kusanganisira Bhizinesi email kukanganisa maitiro anonzi BEC), uye kubiridzira mari pamwe nehurongwa hwekuba 100 mamirioni eurandi kubva kuChirungu Premier League nhabvu nhabvu. Akasungwa.
Chiitiko chekutya kwake kwaive kusiri kwake iye ega. Aive nemubatsiri, Olalekan Jacob Ponle, anonziwo 'Woodberry.'
Nekudaro, Hushpuppi akaenderera achidzokorora nguva uye nguva yaanowana mari yake kuburikidza nekushanda nesimba uye kutsunga.
Hushpuppi Hupenyu hwerudo:
Kune hupenyu hwebhiliyoni, anorova Lagosian akaramba kugara chero mukadzi kana musikana. Akave nehukama hwekare nevakadzi vazhinji.
Mudiki pane vese aimbova musikana wake, Amiyah Dyme akaburitsa mukushushikana kuti Hushpuppi akamurasa nekuti anga asina kumukwanira. Mushure meizvozvo iye akamudana pachena kuti mbavha yakudzwa.
Hupenyu Hwemhuri hwaHushpuppi:
Kuna Raymond, uyo anofanirwa kuve angangoita makore makumi matatu nemanomwe (37) ekuberekwa, vabereki vake vachiri vapenyu uye vanofanirwa kunge vakafarira zvikamu zveupfumi zvakaunganidzwa nemwanakomana wavo anoyevedza.
Vanun'una vake nedzimwe hama zvakare, avo vese vakaita kunge vasingaonekwe.
Zvizhinji nezvevabereki vaHushpuppi:
Sezvatakambotaura kare, kunyange hazvo zvakawanda zvisingazivikanwe pamusoro pababa naamai vake, tinoziva kuti baba vake vaimbove Mutyairi weTekisi muGuta reLagos.
Nenzira imwecheteyo, amai vake vanobheka chingwa uye vanovanyengerera kune vamwe kuti vawane raramo.
Zvimwe pamusoro pehama dzaHushpuppi uye hama:
isu hatisati tine chokwadi nezvehama dzake nehama. Hushpuppi anoita kunge akangwara nezvemhuri yake. Kuva kwake akangwara kunogona kuve nzira yekudzivirirwa kubva kuma media nenhengo dzemutemo dzinosimbisa.
Zvizhinji nezve Hushpuppi Vana:
Zvakanaka here kuti murume anodadisa uye anoridza murume weYoruba haana kuroora? Iye, zvakadaro, ane vana vaviri (2) vana, mukomana nemusikana kubva kuvakadzi vaviri vakasiyana.
Hushpuppi Hupenyu hweMunhu:
Yake yemagariro enhau show-off, anotaura zvakawanda nezverudo rwake rwekupfeka kwaGucci kubva pamawachi, mbatya, mabhegi, mabhandi uye kudzika neshangu. Tinogona zvakare kuwedzera kutora mifananidzo kune yake runyorwa rwekuzvivaraidza sezviri pachena zvichionekwa kubva kune ake enhau enhau zviitiko.
Izvo zvakafanira kucherechedza kuti Hushpuppi anoda kusangana nevanhu vatsva uye zvakare socialite. Ray, aive panguva yakaonekwa pa Naome Campbell's chiitiko cherudo 'Fashoni yeRununuro', yakaturikidzana mukambani yevakawanda vane mukurumbira.
Iye-anozvizivisa Mambo weGucci uye anovandudza zvivakwa akazviitira zita rake kubva pamashandisiro ake emari. Hushpuppi ine Mercedes Benz Maybach, Rolls Royce uye Bentley.
Sezvo muna Nyamavhuvhu 2019, anonzi akatenga nyowani tsvuku Ferrari; Novitec 812 N- Largo. Iyo Ferrari yainzi yaive yakaganhurirwa vhezheni, iine gumi chete inowanikwa munyika. Hushpuppi mambure akakosha anofungidzirwa kunge $ 20 mamirioni kutonga nekutenga kwake kwakanyanyisa kwejeti yakavanzika, mota dzoumbozha, pakati pevamwe.
Kunyangwe hazvo Hushpuppi anofungidzirwa kuti haana imba yake yekugara. Iye, zvakadaro, akahaya dzimba dzeumambo muThailand neDubai; imwe yacho yaiita madhora zviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu emadhora. Hushpuppi iri zvakare pasocial media influencer. Anobhadhariswa zvakawandisa kuti atore mitezo yakasarudzika kupota pasi.
Kunyangwe iwo anozvizivisa mazita e celeb anoratidza mamiriro echiKristu, tinogona kutaura kuti vabereki vake vanofanirwa kuve vaive vechiKristu. Mazhinji ezvehupfumi hwake anoratidza hunhu nekutenda kuna Mwari nekuda kwenzvimbo yake yazvino. Zvakadaro, chinamato chaRaymond chiIslam.
Tichitenderedza nyaya yedu yehucheche uye chinyorwa cheBiography, tinokupa iwe zvirevo zvaungangodaro wanga usingazive maererano neNigerian socialite. Pasina kuzeza, ngatitangei.
Chokwadi #1 - Kamwe Mubhejeri
Waizviziva here? Hushpuppi akambobheja. Zvingave izvo here ndizvo zvairova kwaakaita mamirioni? Zita rake remadunhurirwa rekuti Aja 4, inoratidza kuti anogona kunge akarova lotari jackpot pane imwe nguva.
Chokwadi #2 - Hutongi hwake neVanozivikanwa
Vakakurumbira vaakarwa navo vanosanganisira Davido, Phyno, Tekno, Ice Prince, Eniola Badmus, Timaya, nezvimwewo akataura kuti aibudirira kupfuura Davido nevamwe vese muimbi.
Akaenderera achizvirova dundundu nezvekupfeka kwaanoita mbatya dzekugadzira nepo vanhu vazhinji vekuNigerian vachiratidza kushamisira nemapfekero. Vashoma vakadai Tuface, Tiwa Savage, Wizkid pakati pevamwe haana kana dambudziko naye.
Chokwadi #3 - Zita chinhu
in 9ice's album -'Kurarama zvinhu'- yakaburitswa muna 2016.Zita raHushpuppi rinowanikwa pakati penzira. Chikamu chinofungidzirwa kuti chiri kukurudzira kubiridzira kweinternet.
Chokwadi #4 - Zvemagariro Midhiya
Aine Instagram inotevera yemamiriyoni maviri nemazana maviri nezana rimwe musi waChikunguru 2.5, 11, anoita akawanda ekupa-kure uye nerupo.
Ray Hushpuppi's Biography Dhata
Zita rizere: Raymond Igbalode Abass
Zita rekudanwa: Hushpuppi
Zuva rekuzvarwa: 14th yaJune 1983 (Gore risina chokwadi)
Nzvimbo yekuzvarirwa: Lagos, Nigeria
Basa: Bhizinesi uye Estate Mushambadzi
Net Worth: $ 20 mamirioni (asina kusimbiswa)
Hobbies: Kufamba, kusangana nevanhu uye mapato
Haven verenga yedu Hushpuppi Bio, unofanira kunge wakasarudza mashoma ehunhu kunyaya yake. Nekudaro, isu taizotaura kuti mune zvese sezvaanoda kuti achinje mamiriro ake ehurombo, zvinofanirwa kuwanikwa zvisiri pamutemo?
Pasina kutaura nezve vazhinji mafeni uye vateveri vaakaunganidza nekufamba kwenguva. Zvino ndicho chikafu chekufunga.
Iwe uchaita kugovana zviitiko zvako nesu. Isu tinoenderera kukuvimbisa iwe hwakawanda hwenyaya hwechokwadi neiyo yepamusoro-notch kunyatso uye kurongeka; mvura, huya upenye.